Kedu ka m ga-esi tinye Instagram SEO?
Ọ dịghị mkpa ka ịmepe usoro ihe ọmụma a na-ewu ewu na ntanetị, ebe onye ọrụ ọ bụla nwere ike iche na ọ bụ ọrụ ọkachamara. Lee Instagram n'onwe ya, na-enyefe ihe karịrị nde 50 foto kwa ụbọchị. Ndị na-ege ntị nke ndị debanyere aha na Instagram na-agbasawanye, dị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-amata ọrụ ọhụụ ya pụrụ iche, dị mkpa maka isiokwu nke foto, ma na-ejikọta ihe dị elu nke njikọ kachasị mma. Ọ bụ ya mere echiche nke Instagram SEO maka ịkwalite ikike ikikere, ịbawanye n'ụba okporo ụzọ, ma ọ bụ mgbasa ozi ahịa ọ bụla ọzọ maka ikpo okwu abụghị ihe ọhụrụ ọ bụla.
Wepụtawanye ike maka aha aha gị
N'ụzọ doro anya, Instagram na-enye usoro ikpo okwu dị mma maka ndị enyi iji kekọrịta foto, dịnụ maka edezi na mmetụta dị iche iche ma ọ bụ nzacha, nakwa dị njikere maka ịmepụta ya na hashtags ikwe ka ịchọta ihe ọ bụla maka onye ọrụ ọ bụla. Naanị nkà ọ bụla n'ime foto nwere ike ịchọta ebe a - ịmalite site na selfies na ụfọdụ ihe ntanetị, na ndị ọkachamara n'ịntanetị. Nke ahụ pụtara ịnwe akaụntụ mmekọrịta mmadụ na Instagram nwere ike ịhapụ ohere mgbasa ozi gị na-agbasawanye ahịa na-agwa ndị ahịa nwere ike ịbanye n'ọtụtụ ọkwa.
Na-agba ọsọ ọ bụla n'otu akwụkwọ na akaụntụ Instagram bụ ọrụ dị mfe.Otú ọ dị, ị ga-eburu n'uche ihe ndị na-esonụ tupu ịbanye n'ọrụ. Nke mbụ, ọ dịghị mkpa ebe a iji bipụta naanị àgwà oyiyi ndị na - anọchi anya akara gị kwa ụbọchị. Isi echiche nke ọrụ a bụ na a na-enyekwu onyinyo ahụ ka ọ dịkwuo mma, ọ ga-esikarị ike inweta ya. Naanị emela ihe ọ bụla ị ga-eme, dịka ndị ọrụ agaghị anabata ya. N'ime ihe kachasị mkpa ime, dịka iche echiche maka ihe ngwọta anya na ihe ndị ọzọ, echefukwala itinye embed na profaịlụ ọhụrụ e kenyere gị kpọmkwem njikọ jikọtara ya na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Na-ekwu na ị na-anabata ntụrụndụ
Ijide nzuko foto na Instagram bụ ụzọ kachasị mfe iji mezuo ọnụnọ gị na mpaghara gị, cheta onye ọ bụla na-esonye n'ememe gị na-amalite ozugbo akwalite ụdị gị site na hashtags na ụmụazụ ya ma ọ bụ ndị enyi ya. Ọ bụkwa ihe dị mma iji nwee ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị Fans. Mgbe ị na-etinye maka hashtags, ana m akwado ka ndị na-ege ntị mara nkọwa ndị dị na izu ole na ole tutu oge ahụ abịa. Iji mee ka asọmpi gị na-esikwu ike, echela na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ dị mma iji mee ka ihe dị mma. Ya mere, ị ga-enweta mgbasa ozi ọma mara mma n'ebughị ụzọ tinye otu narị, ebe i nwere ike inwe mmetụta nke ndụ na mmasị nke ndị na-ege gị ntị.
Mee ihe ọzọ, tinyekwuo aka, na usoro okporo ụzọ ga - eto eto
Isi ihe dị n'ime ebe a bụ iche echiche nke hashtags na Instagram dị ka SEO ederede na meta mkpado. Cheta, ihe a ga-abụ "Instagram SEO" chọrọ ịnụ ọkụ n'obi na creativity dị ọcha iji na-etinye aka na isi okwu gị na ndị na-eso ụzọ dị mkpa. Naanị nyefee oge zuru ezu maka ịchekwa usoro maka ụfọdụ ọdịnaya ọdịnaya dị ụtọ na ikwughachi azịza ngwa ngwa. O kwesịghị ichegbu onwe gị - ihe odide ederede mbụ na-eme nke oma maka Instagram SEO, dịka ụzọ ndị ọzọ nke usoro mgbasa ozi ọha na eze. Rịba ama, Otú ọ dị, na Instagram bụ ebe ị ga-esi na-eketa ihe ncheta, na-adịgide adịgide na ụdị oge a, na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kwesịrị ekwesị Source .